समाचार - के तपाईंलाई थाहा छ कि जहाज प्रक्षेपणका लागि एयरब्यागहरू प्रायः वायमेटिक फेंडरहरूसँग मिसिन्छन्?
के तपाईंलाई थाहा छ जहाज सुरूवातका लागि एयरब्यागहरू प्रायः वायमेटिक फेन्डरहरूसँग मिसिन्छन्? एयरब्यागहरू जहाज सुरूवात अपरेशनहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ र यसैले न्यूमेटिक फन्डरहरू भन्दा बिलकुलै फरक काम गर्दछ। वायमेटिक फेंडरहरूले बर्थ स्ट्रक्चर र जहाजहरूको सुरक्षा गर्दछ, विशेष गरी जहाज-देखि-जहाज आपरेशनहरूमा। गुणवत्ता र ती प्रत्येकको कार्य प्रदर्शन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एयरब्यागले एक भाँडा सुरक्षित रूपमा सुरूवात गर्न मद्दत गर्दछ र ती सम्पूर्णतामा काम गर्दछ जुन कम गुणवत्ता आवश्यकताहरू र एक सरल उत्पादन विधिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। एयरब्यागहरूको निर्माण विधिलाई वायमेटिक फन्डरहरूको तुलना गर्न सकिदैन।
Inflatable बल परिचय ：
इन्फ्लेटेबल रबर फेंडर (जसलाई बल पनि भनिन्छ) एक किसिमको मुरिंग बफर र सुरक्षात्मक जहाज आपूर्ति हो, जुन जहाज, अफशोर सुविधाहरू, अपतटीय प्लेटफार्महरू, पोर्टहरू, डकहरू, याटहरू र अन्य फिल्डहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ। Inflatable रबर बल सामान्य रबर फेन्डर भन्दा अधिक व्यावहारिक छ, र यो किफायती छ, त्यसैले यो धेरै लोकप्रिय छ।
इन्फ्लाटेबल फेन्डर एक रबर एयरट्याट कन्टेनर हो जुन स्कायलेट सामग्रीको रूपमा झुन्ड्याइएका ग्लुइ cloth कपडाहरूबाट बनिएको हुन्छ। फेन्डर र बल संकुचित हावाले भरिए पछि पानीमा तैर्न सक्छन्। तिनीहरू जहाज-बाट-जहाज बेर्थिंग र शिप-टु-वार्फ बफर मध्यमको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। उही समयमा, वायमेटिक फ्यान्डरले जहाजको आवागमनको प्रभाव उर्जा ग्रहण गर्न, जहाजको हताशता कम गर्न, र जहाजको डकिkingको सुरक्षामा ठूलो सुधार गर्न सक्दछ।
इन्फ्लाटेबल फेन्डर (बलबाट) हावालाई मध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दछ र प्रभाव उर्जा अवशोषित गर्न कम्प्रेस्ड हावा प्रयोग गर्दछ, डक गर्ने बेला जहाजलाई लचिलो बनाउँदछ, ताकि टकराव र टक्कर परिहारको प्रभाव प्राप्त गर्न। इन्फ्लाटेबल फेन्डर (बलद्वारा) ट्या widely्करहरू, कन्टेनर शिपहरू, इन्जिनियरि। जहाजहरू, समुद्री माछा मार्ने जहाजहरू, अपतटीय प्लेटफार्महरू, ठूला डकहरू, सैन्य पोर्टहरू, ठूला पुल पियर्स र अन्य प्रकारका जहाजहरू र अपतटीय प्लेटफार्महरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
रबर फेन्डर, सिप एयर बैग, समुद्री एयरब्यागहरू, Tec Ships, समग्र ब्लक, चीन रबर फेन्डर,